मनोरञ्जन | BCM Nepal
खुसीको खबर: भारतीय मिडियाको तारो बनेकी मनिषा कोइराला बुवा-आमासँगै नेपाल आउने तयारी
3 months ago by bcmnepalमनोरञ्जन
काठमाडौं । मनिषा कोइराला यतिवेला मिडियामा छाएकी छिन् । एक समय भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउडमा राज गरेकी नायिका मनिषाले नेपाल सरकारले लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा समेट्ने नक्सा जारी गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे परराष्टमन्त्री प्रदीपज्ञवालीले खुशी व्यक्तगरेर गरेको ट्विटलाई रिट्वट गर्दै गरेको टिप्पणीका कारण उनी भारतीय मिडियाको… Read More
4 months ago by bcmnepalमनोरञ्जन
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता इरफान खानको निधन भएको छ। बुधबार ५४ वर्षीय खानको मुम्बईको कोकिला वेन धिरूभाइ अम्बानी अस्पतालमा निधन भएको हो। अभिनेता खान दुई वर्षदेखि क्यान्सरको उपचार गरिरहेका थिए। खानलाई न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमर भएको थियो। जयपुर राजस्थानमा सन् १९६६ मा जन्मिएका खान थिएटरबाट सिनेमाबाट आएका… Read More
कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका हलिउडका १० सेलिब्रेटी
काठमाडौँ । विश्वमा कोभिड १९ पोजिटिभ हुनेमा हलिवुडका ‘क’ श्रेणीका अभिनेता टम ह्यान्क्स , पप सुपर स्टार पिन्क , वेलायतका प्न्सि चाल्र्स देखि वेलायतकै प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सन सम्म रहेका छन् । तर भाग्यवश तिनीहरु सबै ज्यान जोगाउन सफल भए । त्यसैगरी दुखको कुरा कोरोना भाइरस… Read More
मेलिना राईको ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्म…’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
5 months ago by bcmnepalमनोरञ्जन
काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको गीत ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्म…’ सार्वजनिक भएको छ । हिराकाजी थापाकोे शब्द, रोशन गुरुङको सङ्गीत र नोर्वु लामोको एरेञ्ज रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । कृष्ण रसालकोे निर्देशन र टेक छिरिङ लामाको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा रेशम फिरिरि,… Read More
नायिका आँचल शर्माको आज विवाह
6 months ago by bcmnepalमनोरञ्जन
काठमाडौं । नेपाली म्युजिक भिडियो र फिल्ममा राम्रै स्थान पाएकी नायिका आचल शर्माको आज विवाह हुँदै छ। अर्का नाएक पल शाह संग बिगत लामो समय देखि प्रेम चर्चामा आउने नायिका हुन आचल शर्मा। उनको अभिनय र म्युजिक भिडियोमा राम्रै रुचाईएको छ भने उनले अभिनय गरेको… Read More
नेहा कक्कडले पूर्वप्रेमीलाई दिइन् यस्तो कडा चेतावनी
काठमाडौं । नेहा कक्कडका पूर्वप्रेमी हिमांश कोहलीले हालै खुलासा गरेका छन् कि, नेहासँग उनले बिहे गर्न चाहन्थे नेहा आफैले ब्रेकअप गरेकी हुन्। हिमांशले एक अन्तर्वार्ताका दौरान कतिपयले ब्रेकअपको मौका कुरेर बसेका थिए । जसकारण दर्शकले आफ्ना बारेमा गलत धारणा बनाएको बताएका थिए । हिमांशको यस्तो… Read More
चितवनमा भेटिईन ८ वर्षीया बालप्रतिभा, बासको बाजामा यति मिठो स्वर (भिडियो सहित)
चितवन । पछिल्लो समय देशको कुना कुना बाट नयाँ बाल प्रतिभा जन्मने क्रम जारी छ। देशको विभिन्न कुना बाट नयाँ नयाँ प्रतिभाहरु नेपाली समाजमा आएर आफ्नो कला प्रस्तुत गरिनै रहेका छन। ११ वर्षीया कमला घिमिरे होस या अहिले भाईरल भएको आयुशा गौतम, यस्ता बाल प्रतिभा… Read More
नायिका रीश्मा गुरुङले गरिन बिवाह !
काठमाडौं । चलचित्र ‘कबड्डी’को तिन वटै सिरिजमा मैयाँ नामले परिचित कलाकार रीश्मा गुरुङ बैबाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन् । उनको शुक्रबार पोखरामा बिहे भएको हो । आफ्ना प्रेमी सन्दिप गुरुङसँग रीश्माले बिहे गरिन् । पछिल्लो पटक ‘कबड्डी’ को तेस्रो पार्टमा देखिएकी उनले शुक्रवार पोखरामा प्रेमी सन्दिप… Read More
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’को उत्कृष्ट प्रेमपत्र : पाँच सेकेन्डभन्दा बढी हेर्ने हिम्मत गर
प्रिय ६ नं. टेबल ! तिम्रो चस्माको फ्रेमभित्रका चिम्सा आँखाले मलाई नियालेझैँ लाग्छ बेलाबेला। म पनि नजानिँदो तरिकाले मुन्टो हल्लाई कानपछाडि सिउरिएको कपाल अनुहारमा पोखाउने प्रयत्न गर्छु, मेरो लाजको घुम्टो। ठ्याक्क तिमीतिर नियाल्ने हिम्मत आउँदैन आजकल। लामो सास फेर्छु अनि एक, दुई, तीन, चार, पाँच…… Read More
गायिका आस्था राउत तत्काल नेपाल नफर्कने, लेखिन यस्तो स्टाटस…
7 months ago by bcmnepalमनोरञ्जन
काठमाडौं । गायिका आस्था राउत तत्काल नेपाल नफर्कने भएकी छन् । राउतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका बेला उनी तत्काल स्वदेश नफर्कने भएकी हुन् । माघ १ बुधबार भद्रपुरको उडान हुँदै पूर्वी नेपालबाट सिक्किम जान लागेकी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँचमा खटिएकी प्रहरी… Read More